Fahafatesana Sy Rivotry ny Hadisoam-Panantenana Tao Donetsk sy Gaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jolay 2014 18:38 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, русский, English
Vladimir Putin tao Israely, nitsidika ny tsangambato natao hahatsiarovana ny fandresen'ny tafika Mena an'i Alemàina Nazi. 25 Jona 2012. Sampan-draharaha fampitam-baovaon'ny Kremlin, sehatra ho an'ny daholobe.
Ny Alakamisy 17 Jolay, nisy zava-nitranga natao lohateny lehibe tamin'ny gazety : ny fianjeran'ny sidina Maleziana MH17, nambara ho nataon'ireo mpitaky fizakantena ao atsinanan'i Okraina, ary ny fiandohan'ny fanafihana an-tanety nataon'i Israely tao amin'ny Lemak'i Gaza. Raha nahasarika be ny saina taty anaty aterineto Rosiana iry voalohany, ito farany kosa somary niniana natao tsy dia nahataitra loatra. Misy antony mazava ny mahatonga an'io. Tao amin'ny tany Rosiana no nianjera ny MH17, ary ny hoe i Maosko no mety namatsy ilay bala afomanga dia ampy naha-teo amin'ny pejy voalohany an'ilay vaovao. Sady koa, ny totoafon'ny media ao Rosia, izay miezaka mitrandraka ny mety ho teorian'ny tetidratsy rehetra mba hamafazana fisalasalàna amin'ny mety ho maha-meloka ireo mpitaky fisintahana sy i Maosko, dia mety hampiredareda tsara ny adihevitra ety anaty aterineto momba ilay loza mahatsiravina.
Tsy dia mampientanentana loatra toy ny raharaha MH17 ny olana misy amin'izao fotoana izao eo amin'ny Israeliana sy ny Palestiniana. Mifandrohy ankolaka amin'ny tombontsoa Rosiana fotsiny ihany io, ary raha toa i Putin manana fanohanana manokana an'i Israely, tsy ho tonga hatrany amin'ny fanohanana ny ady ataon'ny fanjakana Jiosy amin'ny Hamas kosa. Ny marina, ny famakiana amin'ny fo tony ny fandrakofan'ny RT (Russia Today) ilay fifandirana dia mametraka an'i Rosia indrindra indrindra ho any amin'ny lafy Palestiniana. Ary koa, mora raisina ho toy ny fihodinana farany eo amin'ny herisetra anatin'izao fifanolanana tsy misy farany izao ny fivezivezena mandroso sy miverina eo amin'ny Israeliana sy ny Palestiniana. Na eo aza ny fiakaran'ny isan'ny maty any amin'ny lafy Palestiniana (tamin'ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra, 620 ny tarehimarika), vitsivitsy tamin'ireo mpampiasa ny RuNet no nanoratra fanehoankevitra mba misy lanjany.
io tsy midika hoe tsy misy resaka maika atao mikasika ilay fifandirana. Efa zava-mahazatra ho an'ireo Rosiana mpampiasa Twitter, ohatra, ny mandefa tsy tapaka ireo fanavaozam-baovao momba ilay fifandonana. Efa mandeha ho azy ny bitsika fanisàna ny isan'ny Palestiniana maty. Mivaky toy izao ny bitsika :
Palestiniana 500m no maty hatramin'ny nanombohan'ny hetsika tao amin'ny Lemak'i Gaza.
Na hanasongadinana ny fihazakazaky ny fahafatesana, nibitsika toy izao ny sasany :
Olona maherin'ny 100 no maty tao amn'ny Lemak'i Gaza tao anatin'ny ora 24 farany.
Mpampiasa iray hafa no nanondro ny maha-fonja mitafo lanintra an'i Gaza.
Palestina no fonja midadasika indrindra mitafo lanitra eto an-tany. #Gaza #GazaUnderAttack
Iray hafa mpampiasaTwitter no niteny tsotra hoe :
Manatri-maso ny loza mahatsiravina atao amin'ny maha-olombelona ny Lemak'i Gaza.
Ankilan'ireny bitsika ireny sy ireo lohateny vaventy, tsy ny rehetra,mazava loatra, no mitanisa ny fahafatesana avy amin'ny lafy Israeliana. Raha te-hahazo fanavaozam-baovao avy amin'ny fomba fijery Israeliana, azon'ireo mpampiasa amin'ny fiteny Rosiana atao ny manaraka ny fàhana Twitter avy amin'ny kaonty ofisialin'ny Hery Fiarovana Israeliana, @Tsahal_Rus amin'ny teny Rosiana. Ao ianao no mahita ireo bitsika toy ity manaraka ity :
Hatramin'ny nanombohan'ny fanafihana an-tanety dia mpampihorohoro niisa 110 no nofongorin'ny IDF ary lasibatra 1.302 an'ny mpampihorohoro no voadaroka baomba.
Ankoatry ny fitsikerana ny fahavoazana noho ny ady, ny sasany amin'ìreo mpampiasa RuNet no velom-panontaniana momba ny tsy fisian'ny fanantenana hitsaharan'ity ady mampifanditra efa an-taona marobe ity. Mibilaogy ao amin'ny Ekho Moskvy, Mikhail Osherov, mpandalina ara-politika dia miteny fa tsy vonona mihitsy hihemotra tsy hanao ny Ady Mandritry Ny Enina Andro ny Israeliana. Eo ampisaintsainana ilay fomba fiteny Israeliana manao hoe, “Tsy misy vahaolana,” Osherov manoratra hoe :
Noho ny hamoràny sy ny tsy fisian'ny haba amin'ny hery mpamokatra avy any amin'ny Arabo, ary noho ny tany maimaim-poana any amin'ireo faritra bodoina, nisy fipoahana ara-toekarena tao Israely tany amin'ny faramparan'ny andian-taona 1960 tany ho any sy ny fiandohan'ny andian-taona 1970, izay mbola sitrahan'ireo Israeliana any an-toerana hatramin'izao ny vokany. Ny fiadanan'ny kilasy antonony amin-dry zareo Israeliana, ary ny fahombiazan'ny sehatra manontolon'ny toekarena Israeliana, toy ny asa fanorenana, ny fanamboaran-dàlana, ary ny fambolena, dia mety ho tsy nisy raha tsy teo ny hamoràn'ny hery famokarana avy any amin'ny Arabo, izay ireo vahoaka avy amin'ny faritra Arabo bodoiny no ankamaroany. Ny fampiatoana ny fibodoana dia hidika, raha tsy ny fiafaran'ny “baojy”, dia mety ho fanombohan'ny farany ho an'i Israely sy ny Israeliana.
Raha tokony ho miditra amin'ny adihevitra momba ny fifandiran'ny Israeliana sy ny Palestiniana, dia aleon'ny sasany amin'ireo mpampiasa Twitter nanararaotra ny zava-nisy mba hanaovana fampitahàna amin'i Okraina, indrindra fa hanondroana ny fihatsaràna velatsihin'izao tontolo izao.
@Schrodinger1986 nibitsika hoe:
Amin'izao fotoana izao, ao amin'ny Lemak'i Gaza, manamontsana “mpampihorohoro” vao enina taona monja i Israely ary ao Okraina.. afaka mino na tsia ianao, mitovy amin'izany ny ao Okraina.
Ao anaty lahatsoratra iray nataony amin'ny rindriny ao amin'ny Vkotakte, nanoratra i Sergey Gostev hoe :
Tsy raharahain'ny Firenena Mikambana ny teo-draharaha misy ao Okraina, izay olona maro isanandro no maty raha miohatra amin'ny ao amin'ny Lemak'i Gaza [sic].
Manontany i Vladimir Vladimirov, iray hafa mpampiasa Vkontakte :
Мне вот интересно, летают ли гражданские самолеты над Сектором Газа? И если нет, то почему.
Mba tiako ho fantatra : misy fiaramanidina sivily misidina eo ambonin'ny Lemak'i Gaza ve? Raha tsia, dia inona no antony.
Tsy saro-tadiavina ny hanihany ratsy ety anaty Tranonkala, ary tsy afa-bela amin'izany ireo vaovao avy ao Okraine sy Gaza. Amin'ny filalaovana ny teny Rosiana hoe entona (“gaz”) sy ny dika ara-bakitenin'ny hoe Lemak'i Gaza amin'ny fiteny Rosiana (“ny sehatry ny entona”), nivazivazy ireo mpampiasa sasany,
Nametraka sehatra ho an'ny entona schiste ao amin'ny Donbass i Putler [tsilalaon-teny avy amin'ny “Putin” sy “Hitler”] .
Israely—Sehatry ny Entona, Okraina—Sehatra tsy misy Entona.
Teraka tao Okraina ny “Sehatra Havanana” [hetsika nasionalista] satria tsy nanangana ara-potoana ny antoko “sehatry ny Entona” mpomba ny Rosiana, azy manokana, i Kremlin.
Tsy ny rehetra no lokin'ny hehy tamin'ny raharaha 17 Jolay. @isma_mustafaev nibitsika hoe:
Tena mba nahasoso-tay ahy loatra ireo lohateny vaventy!!! #vaovao #politika #rosia #okraina @palestina #gaza